Linux 4.10.7 Yakaburitswa ne AMDGPU uye Network Enhancements | Linux Vakapindwa muropa
Kumwe kuburitswa kuri kuuya, kumwe kuburitswa kweiyo inozivikanwa kernel. Zvikurukuru, yaive Greg Kroah-Hartman, Linus Torvalds 'ruoko rwerudyi murume, uyo akazivisa kuti iyi nyowani vhezheni vhezheni yekernel inowanikwa. Saka munhu wese anogona kunakidzwa nazvo kana vakagadzirisa kernel yavo kune ino yechinomwe yekuvandudza (Linux 4.10.7) kugadzirisa kwebazi 4.10, pamwe neLinux 4.4.59 LTS uye 4.9.19 LTS, pamwe nebazi razvino rakatsiga raunogona kuwana ku kernel.org.
Chinhu chinoshamisira nezve iyi vhezheni ndechekuti yasvika nekukurumidza, nekukurumidza, kubvira zvakangotora mazuva matatu chete kuoneka mushure mekuburitswa kweLinux 4.10.6, irwo rwekupedzisira runyorwa rwakatangira. Kunyangwe iyo ipfupi nguva iyo yange yave iine, ine shanduko huru pamwe neyakawedzerwa zvigamba. Hwerengedzo emafaira zana nemakumi masere nemasere akachinjwa, paine makodhi zana nemakumi mapfumbamwe nemakumi mairi nemakumi masere nemazana masere nemakumi masere nesere.
Pakati pekuvandudza kuri kugadziriswa kwetsikidzi dzakawanikwa, pamwe ne kuvandudzwa kukuru mune madhiraivha, kunyanya zvine chekuita ne network network, ruzha stack uye mafaera masystem, pasina kukanganwa iwo magirafu. Kwese kugadziridzwa uku kunowanikwa muGit, kana iwe uchida kuitarisa kana kurodha pasi, seizvo Greg akajekesa (iwe unoziva kuti bazi hombe ndiLinus anoona nezvekuzvizivisa uye mhando iyi yematavi ekuchengetedza ndiGreg uyo zvinoita here ...) mukuzivisa kwake kweiyi vhezheni nyowani yakakwana kwazvo munguva yekurekodha.
Pakati pekuvandudzwa kwakakosha ndeyekuvandudza kwevatyairi yemahara mifananidzo AMDGPU, yemasaini Radeon makadhi. Pamusoro pemamwe matinji anokanganisa beep kodhi, CLK, CPUfreq, CPUidle, crypto, DAX, I / O zvishandiso, memory controller, uye network (Ethernet, amd-xgbe, uye isina waya senge Broadcom, Mellanox, Atheros, Marvell, …), Uye pakave nekuvandudzwa kwe ext4 nejbd2, pamwe neUSB, SCSI, Xen, ARM, ARM64, PowerPC, x86, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » vatyairi » Linux 4.10.7 yakaburitswa nekuvandudzwa kune AMDGPU uye network
zvakanaka kwandiri ini ndine amd
Zvinoenderana ne kernel.org yekupedzisira vhezheni vhezheni sa31 / 03 ndi4.10.8
Iyi kernel nyowani ichashanda neiyo nyowani RYZEN 7 uye 5 processor?